‘कोरोना पुनः फैलिए भयावह अवस्था आउन सक्छ’ « Drishti News – Nepalese News Portal
रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्यविज्ञ
१० चैत्र २०७७, मंगलबार ७ : ५४ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । भारतका विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सीमा जोडिएको मुलुक नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले भीडभाड, सभा, सम्मेलन नगर्न आग्र्रह गरेको छ । सर्तकताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार मातहतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । के नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण फैलन सक्छ ? रोक्न कसरी सकिन्छ ? विषयमा जनस्वास्थ्यविज्ञ रवीन्द्र पाण्डेसँग दृष्टिकर्मी प्रदीपराज दाहालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
भारतमा पुनः कोरोना संक्रमित बढेका छन् । नेपालमा के होला ?
यसअघि पनि लापरवाहीका कारण नेपालमा संक्रमणको दर बढ्यो । फेरि भारतबाट नेपालमा संक्रमण फैलने अवस्था बनेको छ । दैनिक पाँच हजारसम्म नेपाल–भारत आवतजावत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमण नफैलिएला भन्न सकिँदैन ।
संक्रमण नेपाल भित्रन नदिन के गर्नुपर्छ ?
होली नजिकिएको छ । मानिसको भीडभाड हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमण झन् फैलिएला नि ?
होली, तराईको विशेष पर्व हो । तर, पनि गत साल जस्तै संक्रमण रोक्न यसवर्ष पनि घरमै पर्व मनाए राम्रो हुन्छ । सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लामा होली मनाउन भारतबाट नेपाल आउने चलन छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट पुनः नेपालमा संक्रमण फैलन सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म होली नमनाए राम्रो होला ।
जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । जुनसुकै बेला संक्रमितलाई अस्पताल लैजाने र उपचार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा परीक्षण र क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकालाई कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन ?
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन निकै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव होला ?